Sukhoi SuperJet SSJ-100 DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 39.2 ကို MB
downloads ရယူရန္ 15 803
AEROPROYECTO (Edgar Guinart ဇျ), ဇာတိ FSX/P3D Rikoooo အားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း
26 / 09 / 2019 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: FSX / FSXမြင်ကွင်းကို၏အနေအထားအပေါ် မူတည်. မမြင်ရတဲ့ခဲ့သည့်ကို virtual ယာဉ်၏ -SE Fixed bug ကို။
ဤတွင် Rikoooo သည့် Sukhoi SuperJet 100 ဇာတိအပေါ်သီးသန့်ဖွင့် FSX နှင့် Prepar3D v4 ။ ဒါဟာ Edgar Guinart ဇျ (၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်AEROPROYECTO) Rikoooo FS2004 ဘို့မူလကခဲ့သောဤမော်ဒယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
တိကျတဲ့: ဒီအထုပ်၏ default အ A321 ၏သောက virtual ယာဉ်နှင့်အတူထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ် FSX နှင့် Rikoooo (ထို SSJ-100 မရှိအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ VC ကိုယခုအချိန်တွင်လည်းမရှိ) ကပြုပြင်မွမ်းမံ, သို့သော် Panel ကို 2D အဆိုပါ SSJ-100 ၏ Edgar Guinart ဇျအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောကွောငျ့ဖွစျသညျကြောင့်ဖြစ်စေ, ရွေးချယ်ဖို့သငျသညျအထိင်သင်သည် VC ကိုအတွက်ပျံသန်း mode ကိုသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့် 2D Panel က SSJ-100 ၏ mode ကို, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လေယာဉ်ဿုံ Control ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ SSJ-100 ကနေအသံနှင့်အတူအသံထဲက Call ထည့်သွင်း, V1 VR V2 gauge အသံ RCB Groundhandling gauge, FMC, အ 2D Panel ကိုနှစ်ခုဗားရှင်း 16 /9မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်4/3မျက်နှာပြင်တစ်ခုခုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သုံး repaints: Aeroflot, Interjet, White က။
2D Panel ဗားရှင်းတွင်သတိပြုပါ add-on စတင်သည် အအေး & မှောင်မိုက်ကို mode ကို, ထိုစနစ်များကောင်းတစ်ချုပ်ကိုင်များအတွက်လက်စွဲကိုဖတ်ပါ။ ဘက်ထရီကိုစတင်ရန်သင်နှင့်အတူလုံခြုံရေးကာကွယ်မှုကိုဖယ်ရှားရန်ရှိသည် ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကို, ဒီအလွန်အရေးကြီးပါသည်ပါ! ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သငျသညျအောကျဖျောပွပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်, ဒီအချက်မှာပိတ်ဆို့စေခြင်းငှါ:
သငျသညျအခြို့အင်ဂျင် 2D Panel ကို mode ကိုကနေမစတင်မပြောမှတ်ချက်ချန်ထားမည်, ဒါပေမယ့်သင်တို့အဘို့ရှိမရှိအနည်းဆုံးလက်စွဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာလျှင်အဘယ်သူမျှမကိုသူတို့ကောင်းကောင်းစတင်ရန် FSX or Prepar3D v4 + ။
အဆိုပါ Sukhoi SuperJet 100 (အတိုကောက်: SSJ100 ကိုလည်းယင်း၏ဟောင်းတဦးအမည်ဖြင့်ရုရှားဒေသတွင်းဂျက်သို့မဟုတ် RRJ အားဖြင့်မသိ, ရုရှား: СухойСуперджет 100) ကုမ္ပဏီ Sukhoi အရပ်ဘက်လေယာဉ်ကုမ္ပဏီ (SCAC) ၏ဒေသဆိုင်ရာလေယာဉ်ပျံ၏မိသားစုသည်။ ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုမေလ 19, 2008 အပေါ်ရာအရပျကိုယူ။
အဆိုပါ SuperJet 100 75 ထံမှ 95 ခရီးသည်အထိတစ်ဦးဘော်ဒါစွမ်းရည်များအတွက်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏အရှည်ပေါ် မူတည်. အများအပြားဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။
2014 ခုနှစ်, Sukhoi SuperJet 100 ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဗားရှင်းဝန်ဆောင်မှုသို့ (ဝီကီပီးဒီးယား) ထားခဲ့ပါတယ်
Author: AEROPROYECTO (Edgar Guinart ဇျ), ဇာတိ FSX/P3D Rikoooo အားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း